कामना सेवाको ऋणपत्रलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको परिचय अंक ‘आईएसआईएन’ प्रदान
काठमाण्डौ। कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडको १० वर्ष अवधि तथा वार्षिक ९ प्रतिशत ब्याजदर भएको ऋणपत्र ‘केएसबीबीएल डिबेन्चर–२०८७’ ले अन्तराष्ट्रियस्तरको परिचय अंक ‘इन्टरनेसनल सेक्युरिटिज आइडेन्टिफिकेसन नम्बर (आईएसआईएन)’ प्राप्त गरेको छ। धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गतका नियम तथा विनियमबमोजिम सीडीएस एन्ड क्लियरिङ...
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले पायो रु. ७५ करोडको ऋणपत्र निष्कासनको अनुमति
काठमाण्डौ । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले रु. ७५ करोडको ऋणपत्र निष्कासनको अनुमति पाएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले गत वैशाख ६ गते सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकलाई ऋणपत्र निष्कासनको अनुमति दिएको हो। यो अनुमतिसँगै बैंकले अब १ हजार रुपैयाँ अंकित दरका कुल ७ लाख ५० हजार इकाइ भएको ‘सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक डिबेन्चेर–२०८७’ नामक ऋणपत्र...
नेपाल बैंकको रु. ३.५ अर्बको ऋणपत्र वैशाख २२ बाट निष्कासन हुने, कति पाइन्छ ब्याज ?
काठमाण्डौ । नेपाल बैंक लिमिटेडले ३.५ अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋणपत्र आउँदो वैशाख २२ गतेबाट निष्कासन गर्ने भएको छ। बैंकले १० वर्षे अवधिको ‘८.५% नेपाल बैंक ऋणपत्र–२०८७’ निष्कासन गर्ने भएको हो। बैंकले १ हजार रुपैयाँ अंकित दरका कुल ३५ लाख इकाइ निष्कासन गर्नेछ। यो ऋणपत्रको कुल इकाइमध्ये २१ लाख इकाइ व्यक्तिगत तबरबाट र बाँकी १४ लाख इकाइको...
काठमाण्डौ। प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडको डिबेन्चर रजिस्ट्रारमा आरबीबी मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेड नियुक्त भएको छ। बैंकको गत चैत २६ गतेको निर्णयअनुसार डिबेन्चर कारोबारसम्बन्धी अभिलेख राख्ने, दाखिल खारेज, नामसारी, रोक्का राख्नेलगायत डिबेन्चरवालाको लगत अद्यावधिक गरी राख्ने सम्पूर्ण कार्य गर्नका लागि आज वैशाख ९ गतेदेखि लागू हुने गरी...
ग्लोबल आइएमई बैंकको डिबेन्चर ओभरसब्सक्राइब्ड
काठमाण्डौ । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले जारी गरेको ३ अर्ब रुपैयाँबराबरको डिबेन्चर ओभरसब्सक्राइब्ड भएको छ। बैंकले गत चैत १ गतेदेखि ‘ग्लोबल आइएमई बैंक डिबेन्चर २०८६/८७’ निष्कासन गरेको थियो। बैंकले १ हजार रुपैयाँ अंकित दरका कुल ३० लाख इकाइ बिक्री गरेको हो। यो ऋणपत्रमा चैत १६ गतेसम्म आवेदन खुला गरिएको थियो। ऋणपत्रमा न्यूनतम २५...
एनसीसी बैंकको रु. ३ अर्बको ऋणपत्रमा आवेदन दिन आज अन्तिम दिन
काठमाण्डौ । नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसीसी) बैंकले निष्कासन गरेको ३ अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्रमा आज चैत १८ गते आवेदन दिने अन्तिम दिन रहेको छ। ऋणपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेडका अनुसार यो ऋणपत्रमा आज बैंकिङ समयसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। यो ऋणपत्रमा न्यूनतम २५ इकाइ र अधिकतममा ३ लाख इकाइसम्म खरिद आवेदन दिन...
ग्लोबल आईएमई बैंकको रु. ३ अर्बको ऋणपत्रमा आवेदन दिन आज अन्तिम दिन
काठमाण्डौ । ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडको रु. ३ अर्बको ‘८.५% ग्लोबल आईएमई बैंक डिबेन्चर २०८६÷८७’ मा आवेदन दिन आज सोमबार अन्तिम दिन रहेको छ। धितोपत्र बिक्री प्रबन्धक सेन्चुरी क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेडका अनुसार यो ऋणपत्रमा आज चैत १६ गते बैंकिङ समयसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। यो ऋणपत्रको निष्कासन गत चैत १ गदेखि गरिएको थियो। बैंकले १...
प्राइम बैंकको रु. ३.५ अर्बको ऋणपत्रमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
काठमाण्डौ । प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडको रु. ३.५ अर्बको ऋणपत्रमा खरिद आवेदन दिने आज चैत १३ गते अन्तिम दिन रहेको छ। धितोपत्र बिक्री प्रबन्धक आरबीबी मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेडका अनुसार आज बैंकिङ समयसम्म यो ऋणपत्रमा आवेदन दिन सकिनेछ। गत फागुन २८ गतेबाट बैंकले १ हजार रुपैयाँ अंकित दरका कुल ३५ लाख इकाइ भएको ‘८.७५% प्राइम डिबेन्चर २०८५’...
एनसीसी बैंकको रु. ३ अर्बको ऋणपत्रमा आजबाट आवेदन दिन सकिने, कति पाइन्छ ब्याज ?
काठमाण्डौ । नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसीसी) बैंकले ३ अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र आज चैत १३ गतेबाट निष्कासन गरेको छ। बैंकले १ हजार रुपैयाँ अंकित दरका कुल ३० लाख इकाइ भएको ‘९.५०% एनसीसी ऋणपत्र २०८६’ नामक ऋणपत्र निष्कासन गरेको हो। कुल इकाइमध्ये १८ लाख इकाइ व्यक्तिगत तबरबाट र बाँकी १२ लाख इकाइ सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरिएको छ। स�...
एनसीसी बैंकको रु. ३ अर्बको ऋणपत्र चैत १३ बाट निष्कासन हुने, कति पाइन्छ ब्याज ?
काठमाण्डौ । नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसीसी) बैंकले ३ अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र यही चैत १३ गते निष्कासन गर्ने भएको छ। बैंकले १ हजार रुपैयाँ अंकित दरका कुल ३० लाख इकाइ भएको ‘९.५०% एनसीसी ऋणपत्र २०८६’ नामक ऋणपत्र निष्कासन गर्ने भएको हो। कुल इकाइमध्ये १८ लाख इकाइ व्यक्तिगत तबरबाट र बाँकी १२ लाख इकाइ सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरिनेछ।...
ग्लोबल आईएमई बैंकको रु. ३ अर्बको ऋणपत्रमा आवेदन दिने म्याद लम्बियो
काठमाण्डौ । ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडको रु. ३ अर्बको ‘८.५% ग्लोबल आईएमई बैंक डिबेन्चर–२०८६/८७’ मा आवेदन दिने म्याद लम्बिएको छ। यो ऋणपत्रको निष्कासन बन्द छिटोमा चैत ४ गते र ढिलामा चैत १६ गते बैंकिङ समयपछि भनिएको थियो। तर मागबमोजिम आवेदन नपरेका कारण म्याद लम्बाउनुपरेको धितोपत्र बिक्री प्रबन्धक सेन्चुरी क्यापिटल मार्केट्स...
प्राइम कमर्सियल बैंकको रु. ३.५ अर्बको ऋणपत्रमा आवेदन दिने म्याद थप
काठमाण्डौ । प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडको रु. ३.५ अर्बको ऋणपत्रमा खरिद आवेदन पेस गर्ने म्याद थप गरिएको छ। गत फागुन २८ गतेबाट बैंकले १ हजार रुपैयाँ अंकित दरका कुल ३५ लाख इकाइ भएको ‘८.७५% प्राइम डिबेन्चर २०८५’ नामक ऋणपत्र निष्कासन गरेको थियो। यो ऋणपत्रको निष्कासन बन्द छिटोमा चैत ३ गते र ढिलामा चैत १३ गते बैंकिङ समयपछि हुने भएको थियो। तर...
ग्लोबल आईएमई बैंकको रु. ३ अर्बको ऋणपत्रमा आजबाट आवेदन खुला
काठमाण्डौ । ग्लोबल आईएमई बैंकको ३ अर्ब रुपैयाँबराबरको ‘८.५% ग्लोबल आईएमई बैंक डिबेच्नर २०८६/८७’ आज (चैत १ गते) बाट आवेदन खुला गरिएको छ। बैंकले १ हजार रुपैयाँ अंकित दरका कुल ३० लाख इकाइ भएको ऋणपत्र निष्कासन गरेको हो। कुल इकाइमध्ये १८ लाख इकाइ व्यक्तिगत तबरबाट र बाँकी १२ लाख इकाइ सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरिएको छ। सर्वसाधारणका लागि...
प्राइम कमर्सियल बैंकको रु. ३.५ अर्बको ऋणपत्रमा आजबाट आवेदन खुला
काठमाण्डौ । प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडको रु. ३.५ अर्बको ऋणपत्रमा आज (फागुन २८) गतेबाट आवेदन खुला गरिएको छ। बैंकको १ हजार रुपैयाँ अंकित दरका कुल ३५ लाख इकाइ भएको ‘८.७५% प्राइम डिबेन्चर २०८५’ नामक ऋणपत्र निष्कासन गरिएको हो। कुल इकाइमध्ये २१ लाख इकाइ व्यक्तिगत तबरबाट र बाँकी १४ लाख इकाइको सार्वजनिक निष्कासन गरिएको छ। सार्वजनिक...
काठमाण्डौ । ग्लोबल आईएमई बैंकले ३ अर्ब रुपैयाँबराबरको ‘८.५ प्रतिशत ग्लोबल आईएमई बैंक डिबेच्नर २०८६/८७’ आउँदो चैत १ गते निष्कासन गर्ने भएको छ। बैंकले १ हजार रुपैयाँ अंकित दरका कुल ३० लाख इकाइ भएको ऋणपत्र निष्कासन गर्ने भएको हो। कुल इकाइमध्ये १८ लाख इकाइ व्यक्तिगत तबरबाट र बाँकी १२ लाख इकाइ सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरिनेछ।...